Inona no atao hoe flexography? Tantara, famaritana ary toetra fototra | Famoronana an-tserasera
Inona no atao hoe flexography?
Nerea Morcillo | | Graphic Design, General
Tena nampidirina teo amin'ny tontolon'ny famoronana sary ny zavakanto an-tsary. Be loatra izany ny fanontana dia lasa ampahany amin'ny 50% amin'ny fitambarany amin'ny ampahany amin'ny tetikasa famolavolana.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hazavainay ny atao hoe flexography, karazana fanontam-pirinty izay ampiasaina betsaka amin'ny famolavolana fonosana rehetra ary tsy izany ihany, fa ao anatin'ny sehatry ny dokam-barotra sy ny varotra ihany koa. Fomba iray hifandraisana amin'ny orinasantsika sy hamolavola azy amin'ny fomba matotra sy matihanina kokoa.
Eto isika dia mamaritra ny teny flexography ary hazavainay ny endri-javatra ananany.
2 tantara kely kokoa
3 Tombony sy fatiantoka
5 Flexography Companies
Ny teny hoe flexography na antsoina koa hoe fanontana flexographic dia iray amin'ireo maro fomba sy karazana fanontana izay misy eo amin'ny tontolon'ny fanontana. Ny mampiavaka an'io fomba malaza io dia ny fampiasana takelaka amin'ny endrika fanamaivanana izay atao pirinty amin'ny substrate samihafa izay fantatra amin'ity tranga ity ho filma. polyester, nylon, metaly, taratasy, baoritra na lamba, izay tsy lamba.
Io fomba fanontam-pirinty io dia natao tany amin’ny fiandohan’ireo taona 20 tany Etazonia fa an’i Frantsa. Hatramin'ny fotoana voalohany fanontana aniline novana anarana izay nomen-danja kokoa ny ranomainty na pigment kely nampiasaina tamin’izany fotoana izany. Am-polony taona maro taty aoriana dia novana ny anarana hoe flexography.
tantara kely kokoa
Tamin'ny 1890 i Bibby Baron no nanamboatra ny milina voalohany izay misy cylinder vita pirinty misy tilikambo miloko eo amin'ny sisin'ny amponga mba hanontana kitapo taratasy. Ny marina dia tsy nahomby ny famoronana toy izany, fa tena heverina ho niandohan'ny milina fanontam-pirinty flexography voalohany araka ny fahafantarantsika azy ankehitriny.
Taona vitsivitsy taty aoriana, tamin'ny 1905, ny milina flexographic voalohany dia navoakan'ny patanty natao ho an'ny fanontana kitapo taratasy, izay nampiasa menaka aniline voatoto amin'ny alikaola ho loko. Roapolo taona tatỳ aoriana, io dingana io dia efa fantatra tany Alemaina ho fanontam-pirinty fingotra.
Flexography ampiasaina ho toy ny dingana fanontam-pirinty Izy io dia noforonina tany Frantsa tamin'ny 1905 by Houleg. Izy io dia rafitra fanontam-pirinty avo lenta, izay ny faritra sasany amin'ny takelaka dia avo kokoa noho ny hafa ary ireo izay mamela ny heviny eo amin'ny taratasy.
Ny rafitra dia mitovy amin'ny ampiasain'ny typography, ny fahasamihafana dia eo amin'ny takelaka ampiasaina. Raha amin'ny typography ny takelaka dia mety ho henjana kokoa, ny fitaovana ampiasaina amin'ny flexography, araka ny anarany, dia malefaka sy fingotra. Raha ny marina, tany am-boalohany dia fantatra ny dingana eo ambanin`ny anaran`ny fanontana amin`ny gum.
Izany no fomba fampiasa indrindra amin'ny fitomboka kaontenera sy fonosana. Tamin'ny taona 50, ny teknika dia namolavola fanontam-pirinty tamin'ny toaka sy ranomainty vita amin'ny rano fa tsy nampiasa ny aniline nentim-paharazana, izay misy poizina kokoa. Taty aoriana ny fampiasana takelaka mifototra amin'ny photopolymers fa tsy ny fingotra, dia midika revolisiona amin'ny teknika.
Ao amin'ny sehatry ny fanontam-pirinty, Architects telo no misy izay tsy mitovy ary samy mifanaraka amin'ny milina flexo.
Ny tena lehibe dia: milina fanontam-pirinty flexo amponga afovoany, milina flexo stack ary milina flexo inline.
Ireo milina ireo dia vita amin'ny: roller anilox izay manamora ny fanontana marina, rafi-pandrefesana dokotera miaraka amin'ny efitrano ranomainty izay manome ny habetsaky ny pigment ilaina ao anatin'ny roller, cylinder plate izay ametrahana ny takelaka fanontam-pirinty, cylinder fanontana izay mijanona ny substrate rehefa manindry azy ny takelaka fanontam-pirinty, ary misy rafitra inking.
Ny dingana dia tena tsotra satria mandritra ny dingan'ny fanontana ny ranomainty dia pumped amin'ny alalan'ny anatiny ao amin'ny efitranon'ny ranomainty rafitra rafitra dokotera izay efa voalazanay tetsy ambony. Ao anatin'io efitrano io dia mahita lelany roa isika izay maka ny ranomainty rehefa mifandray amin'ny roller anilox.
Mihetsiketsika sy mihodinkodina ity roule ity ka mifandray amin'ny fanamaivanana ny takelaka fanontam-pirinty eo amin'ny cylinder ny velarantany, ka mamindra ny ranomainty nangonin'ny lelan'ny dokotera.
Ny tombony amin'ity rafitra fanontam-pirinty ity dia tena zava-dehibe amin'ny media absorbent na taratasy izay mifaninana amin'ny tsenan'ny offset.
Ny milina dia ambany ny vidiny, izany hoe, ireo milina dia tena mora raha ampitahaina amin'ny offset sy hollow fanontam-pirinty, ary vokatra mitovy amin'izany no tratra amin'ny tetikasa sasany izay tanterahana.
Tsy mandoto na mamela marika eo amin'ny lamosiny izy io milina somary malefaka na dia eo aza ny fanamaivanana avo.
Ny takelaka ihany koa dia mora sy tsy lafo, midika izany fa ny fitaovana dia mora ary mahomby ho an'ny asa madinika na antonony. Na izany aza, mbola lafo kokoa noho ny takelaka offset izy ireo.
Izy ireo dia misy hafainganana fanontana lehibe, izay mahatonga ny dingana ho haingana kokoa sy mora kokoa.
Misy ny tsy miovaova ny loko, izany hoe, ny rafitra inking dia mamela ny fanaraha-maso ny loko mandritra ny fanontana printy, izay miantoka ny fahatokiana ny famokarana azy.
Ny fahaizan'ny fahafahana manonta amin'ny fanohanana misoroka sy tsy misoroka, ankoatra ny fahafahana mampiasa ireo endrika isan-karazany indrindra, dia mamela ny tsipika famokarana ho mifanaraka amin'ny karazana tsena maro samihafa.
Vitsy dia vitsy ny lesoka misy amin'ny flexography, maro amin'izy ireo no:
Mamorona effet squash izay manimba ny intonation sy ny loko mifanaraka.
Ny didim-pitsarana ambany noho ny karazana takelaka ampiasaina dia midika fa tsy dia avo loatra ny kalitaon'ny sary.
Misy deformation satria ny fizotry ny loko efatra dia manana fetra sasany.
Ny fampiharana malaza indrindra amin'ity karazana fanontam-pirinty ity dia matetika hita indrindra amin'ny vokatra sakafo isan-karazany, izany hoe amin'ny tsirairay amin'ny fanamboarana ny fonosana. Izany no antony, araka ny efa voalaza teo aloha, ny sehatry ny fonosana. Izany no antony ahitantsika matetika:
Famonoana sy famonosana
Cellophane na plastika
Fitaovana sarotra kokoa toy ny tetrabriks
Fitehirizana ronono sy zava-pisotro
Kitapo taratasy sy harona plastika
boaty taratasy henjana
Fonosana tsirairay toy ny solomaso sy kaontenera ary etikety sy marika.
diflex dia orinasa naorina tamin'ny 1995 ary miorina ao Madrid (Espaina), dia orinasa mahomby, izay ao anatin'ny fotoana fohy, ny orinasa dia nahazo laza tsara amin'ny kalitao, ny tsy fitoviana, ny fotoana fandefasana fohy, ny serivisy avo lenta ary ny fanavaozana tsy tapaka.
Izy io dia orinasa manana vina mazava sy fiantsoana mpitarika izay mametraka ny fahombiazany amin'ny traikefan'ny mpiasany, ary tsy mampaninona ny mampiasa vola amin'ny toeram-piasana tena tsara sy ny fotodrafitrasa maoderina indrindra.
Esko dia nampiditra ny HD Flexo amin'ny tontolon'ny fanontam-pirinty flexo, ary nanomboka teo dia niala tamin'ny famokarana gravure ny orinasa. Ny tombony dia tsara loatra raha tsy hadino: sambany ny mpifaninana amin'ny fanontana flexo ny kalitaon'ny fanontam-pirinty gravure sy letterpress.
Io no sehatra ara-teknika mahazatra ho an'ny orinasa nasionaly flexography sy ho an'ny rojo sanda rehetra, manome ny fitaovana ilaina rehetra ahafahan'ny mpanonta manatanteraka na manatsara ny asany avy amin'ny sehatra sy sehatra samihafa.
Manome vaovao sy fahalalana amin'ny alàlan'ny fihaonambe ara-teknika isan-taona, fiofanana, lahatsoratra ara-teknika, fivoriana tsy tapaka, gazety isam-bolana ary an'ny FTA Europe, ny Flexographic Technical Association, izay misolo tena ny tombontsoa iraisan'ny indostrian'ny fanontana flexographic Eoropeana.
Fina dia manana ny fiaviany ao amin'ny orinasam-pianakaviana Rotogravure Fina, naorina tamin'ny 1974, manokana amin'ny fanontana haino aman-jery mora vidy ho an'ny fonosana mpanjifa. tsara androany, manolotra vahaolana mandroso sy namboarina, amin'ny gravure sy flexography, mankany amin'ireo orinasam-pisakafoanana sy sehatra hafa.
Ankoatr'izay, manana fanatrehana iraisam-pirenena manan-danja izy io, miaraka amin'ny fanondranana any Alemaina, Frantsa, Portugal ary Royaume-Uni. Ny fanavaozana, ny teknolojia manara-penitra ary ny fahaiza-manaon'ny fomba fiasa, miaraka amin'ny fanajana tanteraka ny tontolo iainana, no fanalahidin'ny filozofia Fina.
Raha tonga amin'ny faran'ny lahatsoratra ianao dia afaka manampy fotsiny fa manantena izahay fa nianatra bebe kokoa momba ity teknika fanontana ity izay efa nampiasaina nandritra ny taona maro ary manana tantara.
Mihabetsaka ny orinasa miloka amin'ny flexography ho fitaovana lehibe amin'ny famokarana, satria asa tena ilaina any amin'ny firenena samihafa. Fanampin'izany, maro amin'ireo vokatra vidianay sy lanintsika isan'andro, isaky ny fonosana na fonony, dia nisy dingana flexography hafa natao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inona no atao hoe flexography?
Isotypes: inona izy ireo ary ohatra
Ahoana ny fampiasana Photoshop